သူသည် burgundy အပြာရောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပြ Eddie Newton နှင့်လမ်းခွဲခဲ့သည်။ ဤခွဲခွာခြင်းပြီးနောက်အဗ္ဗဒူလာအစီဒီသည်ထရာဘဇွန်porတွင်နည်းပြအသစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒီအစီအစဉ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုနားလည်မှုရှိသူအစီအစဉ်၊ စနစ်၊ စည်းကမ်းနှင့်နားလည်မှုတို့ကိုရှင်းပြပြီးအဂတိလိုက်စားမှုများကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်း Abdullah Avcıသည်ရာသီအလိုက်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်မည့် Trabzonspor ကိုဖန်တီးရန်သူ၏လက်များကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဆရာသည်ဤရည်မှန်းချက်များအားလုံးပြည့်စုံစေရန်ယနေ့ Bordeaux-Blue အဖွဲ့တွင်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။
BETPAS423 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! BETBOO648 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SULTANBET568 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBABA100 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBOO868 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
10 Comments on BETBOO868 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
MERİÇ December 2, 2020 at 7:40 am
ECE December 4, 2020 at 10:00 pm
AHMET December 5, 2020 at 12:00 am
TALHA December 9, 2020 at 9:20 am
MELEK December 9, 2020 at 12:40 pm
TUNA December 9, 2020 at 9:40 pm
ÖZNUR December 11, 2020 at 1:10 am
GAMZE December 11, 2020 at 10:00 pm
YUSUF December 12, 2020 at 11:10 am
SEYHAN December 12, 2020 at 3:00 pm